Tady vaovao ho an'ny famantaranandro Android Wear | Androidsis
Nahazo fehy vaovao avy amin'ny mpanamboatra samihafa ny Android Wear
Ny volana aprily no volana natokana ho an'ny mpampiasa maro izay te hitahiry, voalohany, ary avy eo mividy, dia afaka mahazo ny iray amin'ireo vokatra andrasana indrindra tato ho ato amin'ny tontolon'ny Apple, ilay Apple Watch malaza.
Ireo avy any Palo Alto dia nanao fanentanana samihafa hampiroboroboana ny akanjo anaovany voalohany, izay antenaina ho mpamatsy indrindra na eo aza ny vidiny lafo. Na izany aza, ny fifaninanana mivantana indrindra ho an'ny paoma dia ny Android Wear. Izany no antony, ireo an'ny Mountain View, nanararaotra nanala ny lazan'i Apple mandritra ireo andro ireo hanambara mpiara-miasa vaovao amin'ny Android Wear.
Ireto mpiara-miasa vaovao ireto dia tonga amin'ny endrika fitaovana ho an'ny famantaranandro marani-tsaina, fehy manokana. Hatramin'izao, vitsy ny famantaranandro azo namboarina manokana. Angamba ny Moto 360 no famantaranandro azo namboarina indrindra hatramin'izao ka lasa iray amin'ireo smartwatches kanto indrindra eny an-tsena. Na izany na tsy izany dia tsy manana fanaingoana ara-batana ireo rindrambaiko hafa, fa hiova izany amin'ny fanambaràna vaovao izay nataon'ny motera fikarohana androany.
Ny ankamaroan'ny fitaovana Android Wear dia mampiasa tadiny 22mm mahazatra. Hatramin'izao, ny safidy hanovana ny tadin'ny famantaranandro dia efa be dia be, fa ankehitriny kosa dia mihitatra ny isan'ireo kojakoja noho ny fifanarahana vaovao azon'i Google miaraka amin'ireo mpiara-miasa vaovao telo. Ireo mpiara-miasa ireo no efa fantatra, E3 Supply Co., Worn & Wound, ary Clockwork Synergy, mpiara-miombon'antoka izay hanome tadin-koditra amin'ny loko samihafa, ary fitaovana hafa izay mahatonga ny famantaranandro ho tsara tarehy kokoa rehefa tonta.
Ireo fehy rehetra ireo dia mety amin'ny Android Wear raha mbola 22mm ny tariny. Noho izany, amin'ny fahatongavan'ireny fehin-kibo vaovao ireny dia tsy ratsy tarehy intsony ny smartwatches Android ary nalaza kokoa na inona na inona ny volavolan'ny famantaranandro. Ny vidin'ireo fehikibo ireo dia miovaova arakaraka ny fitaovana, ny elanelam-bidiny dia avy 12.95 65 $ ka hatramin'ny $ XNUMX ho an'ny tady hoditra vita tanana. Ireo kojakoja vaovao ireo dia misy amin'ny tranokala ofisialin'ny mpanamboatra ary koa hita ao amin'ny magazay toa an'i Amazon. Ary ho anao, Inona araka ny eritreritrao fa ny famantaranandro Android Wear dia manana tombony azo amboarina bebe kokoa amin'ny fahatongavan'ireny fehikibo vaovao ireny? ?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Nahazo fehy vaovao avy amin'ny mpanamboatra samihafa ny Android Wear
Paikadin'i Marketing vaovao an'ny LG: Hotsapaan'ireo mpampiasa 4 ny G4000
Avereno jerena ny LG G Pad 10.1, takelaka 10-inch manontolo latsaky ny 200 euro